Campaign - Rohto Myanmar
Rohto Myanmar > Campaign
Rohto နှင့်Mango Ocean တို့မှပူးပေါင်းပြီး Rohto ထုတ်ကုန်များအားအရမ်းတန်တဲ့‌ဈေးနှုန်းများနဲ့ Online ကနေတိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးသွားမယ့် အစီအစဉ်လေးရောက်ရှိလာပြီနော် Promotion ကလဲ Up to 30% ထိဆိုတော့ အရမ်းကို သက်သာနေပြီနော်။ Rohto and Mango Ocean Product Live Sales ကိုအောက်ပါနေ့မှာ ဝင်ရောက်အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ နေ့ရက်။ ၂.၁၀.၂၀၂၁ အချိန်။ နေ.လည် ၂ နာရီ
Acnes တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု အစီအစဉ်
Acnes ချစ်သူများအတွက် သီတင်းကောင်းလေးပါ။ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ရက်နေ. ည ၁၀နာရီတွင် Acnes ထုတ်ကုန်များအား Acnes Myanmar မှ မင်းသားအောင်မင်းခန်. MC Teresa Khine တို.မှ Acnes Myanmar Page နှင့် Medicare Myanmar Page တို့မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင်းရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဂိမ်းအစီအစဉ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။ Lucky Draw အစီအစဉ်များကို တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်ပါသဖြင့် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ရက်နေ.တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှုအစီအစဉ်အား ကြည့်ရှုပါရန် ကျွန်ုပ်တို.မှသင့်အားတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ချစ်လှစွာသော ကျွန်ုပ်တို.၏ Acnes ချစ်သူများ ကိုဗစ်-၁၉ အခြေအနေကြောင့် Suzuki Ciaz ကားမဲဖောက်ပေးမည့်အစီအစဉ်အား ခေတ္တခဏ ရွှေ့ဆိုင်းထားပါသည်၊ မဲဖောက်ပေးမည့်ရက်အသေးစိတ်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပေးသွားပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
For ROHTO lovers, it is now easy to order online If you want to order online, you can easily buy from shop.com.mm, Mogozay, Rgo47, Myanmar Drecome Beauty, Wer Loop and Spree.com.mm